Japàna: Mpaka saringajety Japoney maty tany Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Japàna: Mpaka saringajety Japoney maty tany Myanmar
Voadika ny 28 Septambra 2007 22:10 GMT
Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 27 Septambra, dia maty noho ny tifitra ny mpaka saringajety Nagai Kenji raha mbola teo am-panaovana ny asany izy ka nitatitra ireo zava-mitranga any Myanmar.
Tamin'ny voalohany aloha ny tatitra dia nanambara fa mety ho « bala tsinahy » no nahakasika an'i Nagai, raha nanomboka nitifitra ireo mpikomy ireto mpitandro ny filaminana. Kanefa araky ny ambaran'i Hosaka Nobuto, izay mpanohitra ara-politika ao amin'ny blaoginy :
昨日の夜、日本人ジャーナリスト長井健司さんが死亡したというニュースが飛び込んできた。当初は、「流れ弾にあ たったのか」とも言われたが、1メートルの至近距離からビデオ撮影中に銃撃されたという情報も出てきており、軍事政権兵士によるジャーナリスト殺害であっ た可能性も高い。
Omaly alina dia re fa maty ny mpanao gazety Japoney Nagai Kenji. Tamin'ny voalohany dia nambara fa « bala tsinahy no nahavoa azy » rehefa nodinihina anefa ireo sary dia nisongadina fa iray metatra monja no elanelana nisy ny basy nitifirana azy, karazany mipetraka ankehitriny fa ninian'ireto miaramilan'ny governemanta ny nitifitra ity mpanao gazety ity.
Mazava ho azy fa marobe ireo mpiblaogy izay mitatitra fa i Nagai dia toa karazana nitolo-batana satria tsy mba niviona akory izy raha nipoaka ireto basy. Marobe koa anefa ireo izay manameloka ny fitondrana jadona ara-miaramilan'i Myanmar sy ny fanitsakitsahany ny zon'olombelona.
Isan'ny zavatra tsikaritra amin'ity raharaha ity ny toeran'ny sary sy ny fampiasana azy. Sary iray mitovy no nasehon'ny gazety Asahi Shimbun amin'ny laharana maraina sy hariva, saingy ny sary niseho maraina dia notapahina mba hanafina ny vatan'i Nagai mitsitra amin'ny tany taorian'ny tifitra nahavoa azy. Araky ny nambaran'ny mpiblaogy coral_island,
Diniho tsara ireo sary roa ireo. Tena sary iray mitovy ireo. Ny laharana maraina ninian-dry zareo mihitsy ny hanapaka ny sary mba tsy ahitana an'i Nagai Kenji sy ilay miaramila nitifitra azy. Tena hafa mihitsy ny vaovao ampitain'ny sary taorian'izany.
Ny tiana ho marihina momba ity raharaha ity dia tsy mba fomban'ny fampahalalam-baovao Japoney ny mampiseho vatana mangatsiakan’ olona maty. Anefa ny laharana harivan'ny gazety Asahi, dia sahy nampiseho an'i Nagai mitsitra amin'ny tany, ary mbola miezaka ny maka sary na dia efa eo am-pialan'aina aza.
Ny mpibalogy Kyo no My News no manome fanampim-panazavana amin'izay antony mety ho nandikana io fomba fanao io tamin'ity voina nihatra tamin'i Nagai ity.
Na izany na tsy izany, ireo televiziona dia tsy mba sahirana mihitsy amin'ny fandefasana sarin'olona maty voatifitra. Marina fa tsy andian-tsarimihetsika ity indray mitoraka ity. Fa tena zavatra nitranga tokoa. Anefa raha ny momba an'i Nagai, dia mbola niaina raha ilay izy voaray teo amin'ny sary iny. Mety noheverin-dry zareo izany fa tsy misy olana, satria sarin'olona mbola velona no aseho fa tsy « vatana mangatsiaka » tsy akory.
04 Aogositra 2021Azia Atsinanana
Miarahaba anao tafiditra amin’ny fandikan-teny ry Tomavana. Dia mahereza indrindra ary enga anie tsy hiara-mandika zavatra iray isika mirahalahy 🙂
29 Septambra 2007, 07:25
Misaotra betsaka amin’ny teny mamy sy ny firariantsoa 😀 saika nitovy tokoa ny lohahevitra nofidiantsika omaly atao akory fa izany ny atao hoe nifanojo ny tia sy ny manina, sa ?
29 Septambra 2007, 14:30
Avoahy kely ilay nosoratako io fa tsy mety tafavoakako aty…aza fady e!
01 Oktobra 2007, 07:52
Mialatsiny fa tsy tazako avy aty akory anie ilay izy e 🙁 Angamba izay olony manana fidirana ara-Admin toa an-dry Mialy no afaka hamaha ny olana. Mialatsiny indrindra ry ise a.
01 Oktobra 2007, 18:47